Kulan sannadeedka golaha wasiirrada oo la soo gaba-gabeeyay - Halbeeg News
Kulan sannadeedka golaha wasiirrada oo la soo gaba-gabeeyay
MUQDISHO (HALBEEG)- Kulan sannadeedka dar-dar gelinta qorshayaasha qaranka golaha wasiirrada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo labadii maalmood ee u danbeeyay socday ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Golaha wasiirada ayaa isku raacay in la xoojiyo wada shaqaynta ka dhaxaysa hay’adaha dawladda, dar-rar gelinta dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta amniga caasimadda, in dhaqankii khaldanaa lagu bedelo dhaqan ku salaysan run isu-sheegid, in si hufan loo ilaaliyo amaanada ummadda iyo in la xoojiyo isla xisaabtanka.
Sidoo kale golaha ayaa isku raacay in dib loo eego hal-beegyada siyaasadda loo dhanyahay oo xooggana la saaro dhamaystirka dastuurka, meel marinta sharciyada muhiimka u ah hannaanka awoodda loogu celinayo gacanta shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan hoggaanka ay xaqa u leeyihiin.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Kheyrre oo khudbad kooban ka jeediyay xiritaankii kulanka ayaa sheegay in mas’uuliyiinta fursadda u helay in lagu aamino aayaha ummadda Soomaaliyeed laga doonayo in ay uga soo baxaan mas’uuliyaddooda sidii loogu aaminay oo ay ka shaqeeyaan danta ummadda Soomaaliyeed.
Xassan Cali Kheyrre ayaa ku boorriyay wasiirrada in ay dhaqan geliyaan qodobadii kasoo baxay shir sannadeedka si loo gaaro hiigsiga ummadda Soomaaliyeed.
Macallimiinta Jaamacadaha Nigeria oo bilaabay shaqo joojin